Khabiir: Isbadalka Suuqgeynta Kanaalka Isgaarsiinta | Martech Zone
Axad, Oktoobar 20, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Adeegyada Suuqgeynta Khibradaha 'suuqgeynta marinka kanaalka waxay awood siineysaa sumadaha si ay u maareeyaan una fuliyaan dhammaan isdhexgalka macaamiisha hal nidaam oo keliya, waqtiga dhabta ah - kana saaraan baahida loo qabo dhowr madal oo kala duwan iyo iibiyeyaal shaqsiyeed. Barxadku wuxuu awood u siinayaa noocyada inay si fudud ula midoobaan fikradaha macmiilka ilo kasta oo xog ah si ay u abuuraan caqli badan, oo wax ku ool ah, isdhexgalka macaamiisha ee ku saabsan emaylka, moobiilka, bulshada, shabakadda, daabacaadda iyo muujinta xayeysiinta.
Khubarada Suuqgeynta Khabiirada Iskuduwaha ee Khibrada Bixiya:
Isdhexgalka xogta - Ka hel aragti dusha sare ee macaamiishaada adoo isku daraya xogta macaamiisha meel kasta, iyo lakabinta Adeegyada Suuqgeynta Khibradaha 'fikradaha macaamiisha hodanka ah
Maareynta olole-is-marinka - Si guud u maaree dhammaan ololeyaasha kanaallada iskutallaabta ah oo si habsami leh u gaarsiiya macaamiishaada khibradaha ugu caansan
Maareynta isdhexgalka - Soo qabo jawaabaha iyo dareenka macaamiishaada, ka dibna isla markiiba ka faa'iideyso xogtaas si aad u habboon oo isdhaxgal isweydaarsi isugu jirta
Mid ka mid ah qodobada uu Experian ku muujiyey buugyaraha suuq-geynta ee isku-gudbinta kanaalka waa fure… macaamiishaadu ma arkaan channels, waxay arkaan hal sumad. Natiija ahaan, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad isku dubarido dadaalada ka socda kanaallada oo dhan si loo yareeyo hoos u dhaca, loo aqoonsado macmiilka meel kasta oo ay joogaan, oo aad ula hadasho shaqsi ahaan si habboonna aad u siiso xiriirka ay la leeyihiin astaantaada.
Tags: iskutallaabtasuuqgeynta kanaalkamadal suuq-geynta marinkatijaabo
10 Istaraatiijiyada Waxqabadka Iibka Si Loo Ogaado
Nov 22, 2013 at 1: 55 AM
Dhawaan waxaan ahaa mid si aad ah ugu hooseeya lacag iyo deymo ayaa iga cunaayay dhinac walba! Taasi waxay ahayd ilaa aan go'aansaday inaan lacag ka sameeyo internetka. Waxaan aaday sahmiyaha sameeyaha dot net, waxaanan bilaabay buuxinta xog uruurinta lacagta, waana hubaa inaan aad u awooday inaan bixiyo biilashooda !! Aad ayaan ugu faraxsanahay, sidan ayaan sameeyay !! Iyada oo culeys dhaqaale oo dhan uu jiro sanadahan, runtii waxaan rajeynayaa in dhammaantiin aad fursad siisaan. - vttm
Jan 4, 2014 at 5: 15 AM
aJ5u - Dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxaan aad ugu yaraa lacag iyo deyn ayaa i dilayay dhinac walba! Taasi waxay ahayd Mid Xaq ah Ilaa aan ka bartay sameynta lacag .. ee 'INTERNET'! Waxaan ku degay shayga sahaminta ee shirkada, waxaan bilaabay inaan sameeyo sahamin lacag, sidaasna aan ku sameeyo, waxaan aad u awooday inaan wax qabsado !! Waan ku faraxsanahay, inaan sidan sameeyay !!! Iyada oo culeys dhaqaale oo dhan uu jiro sanadahan, runtii waxaan rajeynayaa in dhammaantiin aad fursad siisaan. r04O